Tigidhada Tareenka Trenitalia ee Jaban iyo Qiimaha Safarka | Save A tareenka
Tigidhada Tareenka Trenitalia ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Guriga > Tigidhada Tareenka Trenitalia ee Jaban iyo Qiimaha Safarka
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Tigidhada Trenitalia ee jaban iyo Qiimaha safarka Trenitalia iyo faa iidooyinka.
mawduucyada: 1. Trenitalia by Highlights Tareenka
2. Ku saabsan Trenitalia 3. Indheergaradka si aad uhesho Tigidhada Tareenka Trenitalia oo Jaban
4. Waa imisa qiimaha tikidhada Trenitalia 5. Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay qaadashada Trenitalia, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Waa maxay faraqa u dhexeeya Standard Economy, Premium, Ganacsiga iyo fulinta ee Trenitalia 7. Ma jiraa rukhsad Trenitalia ah
8. Muddo intee le'eg ka hor bixitaanka Trenitalia inuu yimaado 9. Waa maxay jadwalka tareenka Trenitalia
10. Saldhigyadee ayaa laga adeegsadaa Trenitalia 11. Trenitalia FAQ
Trenitalia by Highlights Tareenka
Shirkadda Trenitalia waxaa la bilaabay 1-da bisha Juun 2000.
Gudaha 2005, ah Falaadh cas 1000, Khadka tareenka ee ugu dheereeya ee Trenitalia ayaa la bilaabay. Xawaaraha uu Frecciarossa 1000 Wuxuu gaarayaa 300km saacaddii.
Wadada tareenka ee ugu weyn Caalamka waa inta udhaxeysa Geneva iyo Milan waana qaadataa 4 saacadood on doonta Trenitalia.
Trenitalia waxay ka shaqeysaa adeegyo tareen oo masaafo dheer iyo isku xirnaan iyo tareeno goboleed meelkasta oo Talyaani ah.
Ku saabsan Trenitalia
Tareenka xawaaraha sare ku socda ee Trenitalia waa adeeg isku xira waqooyiga iyo koonfurta iyo bariga iyo galbeedka Talyaaniga iyo sidoo kale Talyaaniga iyo Switzerland, Faransiiska, Awstariya, iyo Germany.
The tareennada trenitalia waxay ku safrayaan ilaa 3-km saacad dariiqyada xawaaraha sare.
In kaliya 3 saacadaha waad ka safri kartaa Milan ilaa Rome iyo min Milan ilaa Bologna 1 saacad.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso waxay tababartaa tigidhada Trenitalia
Indheergaradka si aad uhesho Tigidhada Tareenka Trenitalia oo Jaban
Tirada 1: Ballanso tigidhada Trenitalia intaad awoodid
Tigidhada Trenitalia waa la heli karaa inta u dhaxaysa 2 si ay u 4 bilood kahor taariikhda bixitaanka. Kaadhista tigidhada Trenitalia horay u dammaanad qaadka aad u hesho tikidhada ugu jaban oo aad u kooban. Tigidhada tareenka ayaa kor u kaca qiimaha marka aad ku soo dhowaato maalinta safarka, sidaas si lacag ku keydi iibsiga tikidka tareenka, dalbo inta ugu badan ee suurtagal ah kahor.
Tirada 2: Ku safro Trenitalia xilliyada ugu sarreeya
Tigidhada Trenitalia way ka jaban yihiin saacadaha shaqada badan yihiin, bilowga usbuuca, iyo inta lagu jiro maalinta iyo badhtamaha usbuuca safarada tareenka (Talaado, Arbacada, iyo Khamiista) inta badan waxay bixiyaan qiimaha ugu jaban. Qiimaha ugu wanaagsan, ha qaadan tareenka Trenitalia subaxa hore iyo fiidka hore inta lagu jiro usbuuca (sababtuna tahay safarro ganacsi oo badan). Ka fogow haddii ay suurtagal tahay qaadista tareennada Trenitalia galabnimada Jimcaha iyo Axadda (ku habboon gubashada marinnada toddobaadlaha) iyo inta lagu gudajiro ciidaha dadweynaha iyo waliba xilliyada ciidaha iskuulka maxaa yeelay munaasabadahaan qiimaha tikidhada Trenitalia ayaa cirka isku shareeray.
Tirada 3: Dalbo tikidhadaaga Trenitalia markaad hubto jadwalka safarkaaga
Adeegga tareenka ee Trenitalia ayaa baahi weyn loo qabaa. Tigidhada tareenka ee Trenitalia Base waa la beddeli karaa oo la beddeli karaa iyada oo aan xad lahayn oo tikidhada Heerka Dhaqaalaha waa la beddeli karaa hal mar ka hor taariikhda bixitaanka tareenka. Ma beddelan kartid ama ma soo celin kartid tigidhada kale ee Trenitalia, laakiin waxaa jira gole internet oo aad ku iibin karto tigidhkaaga Trenitalia gacan labaad. Keydso Tareenka Tareenka ee loogu talagalay Safarka Trenitalia waa inaad ballansato markaad hubto jadwalka safarkaaga.
Tirada 4: Iibso tikidhadaada Trenitalia wadada Save A Train
Save A Train waxay leedahay bixinta ugu badan ee tikidhada tareenka ee Yurub iyo adduunka oo dhan, waxaan helnaa tikidhada Trenitalia ugu jaban. Waxaan ku xirannahay shaqaale badan oo tareenada wadata oo algorithmkeena ku siiya marwalba tikitka Trenitalia ee ugu jaban gudaha Taliyaaniga iyo isku darka wadayaasha kale ee tareenka meelaha kale.. Waxa kale oo laga yaabaa inaan helno bedellada tareenka Trenitalia.
Waa imisa qiimaha tikidhada Trenitalia?
Qiimaha tigidhada Trenitalia tusaale ahaan waxay kubilaaban karaan € 21 waqtiga hormarinta laakiin waxay gaari karaan € 97 daqiiqada ugu dambeysa. Qiimaha trenitalia ku tiirsanaanta fasalka aad dooratay oo halkan waxaa ku yaal miis soo koobaya qiimaha celcelis ahaan fasalkiiba Rome-Naples / Rome – Milan / Milan – Safarada tareenka Florence:
Jaangooyo 21 € – 70 € 40 € – 130 €
Ganacsiga 47 € – 97 € 90 € – 190 €
Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay qaadashada Trenitalia, oo aan lagu raacin diyaaradda?
1) Faa'iidada tareenada Trenitalia waxay ka bilaabataa xaqiiqda inaad bixi karto oo aad toos u imaan karto bartamaha magaalada magaalo kasta oo aad ka soo safarto. Dhab, Tani waa wax si gaar ugu ah tareenada, gaar ahaan haddii aad tababar ku bixiso safarka Rome, Milan, Florence, Geneva, ama Monaco, waa u faa iido weyn Trenitalia. Sababta oo ah safarka wuxuu ku toosan yahay bartamaha magaalada, Waxaad ka fogaataa ciriiriga taraafikada mana jiraan wax ka xun inaad ku xayirnaato taraafikada waqtiga fasaxa.
Markay timaaddo Trenitalia tigidhada tareenka qiimeyn, qiimayaashu badanaa way kala duwan yihiin. Xayeysiinta qaarkood ayaa kuu oggolaanaya inaad hesho tikidhada tareenka rakhiis ah, laakiin maalmihii ugu dambeeyay kahor bixitaanka, qiimayaashu way sii kordhayaan sidaa darteed haddii aad jeceshahay safarka fudud, Trenitalia ayaa adiga loogu talagalay!
2) Ku safridda diyaaradda waxay leedahay habraacyada amniga maddaarka. Tan macnaheedu waa inaad ugu yaraan noqotid 2 saac ka hor bixitaankaaga qorsheysan. Iyada oo la adeegsanayo Trenitalia, waxaad u baahan tahay inaad kaliya timaadid 30 daqiiqado kahor. Sidoo kale, waa inaad ka raacdaa garoonka diyaaradaha bartamaha magaalada. Sidaas, hadaad tiriso waqtiga safarka oo dhan, Trenitalia had iyo jeer way guuleysataa wadarta wakhtiga safarka iyo waliba qiimo haddii aad waqtigaaga u xisaabinayso lacag ahaan.
3) Mararka qaarkood qiimaha tikidhada Trenitalia way ka sarreeyaan diyaaradda iyagoo qiimaha wejiga tigidhada ah, laakiin isbarbar dhiggu waa inuu kujiraa inta ay kugu kacayso inaad ku qaadato wax gaadiid ah garoonka diyaaradaha. Ka sokow, mararka qaarkood, sidoo kale waxaad helaysaa waqti firaaqee goorma ku safraya tareennada Trenitalia iyo ugu dambeyntii Trenitalia, ma lihid khidmadaha shandadaha.
4) Ugu dambayn, Diyaaradaha ayaa kamid ah sababaha wasaqowga hawada, heerka isbarbardhiga, Tareennada Trenitalia waa jawi saaxiibtinimo badan, iyo hadaad barbardhigto diyaarad safar safar, Safarka tareenka waa 20x ka yar kaarboon-hawada ka yar inta ay diyaaraduhu ka badan yihiin.
Waa maxay farqiyada u dhexeeya Heerka Dhaqaalaha, Premium, Ganacsiga, iyo fulinta Trenitalia?
Trenitalia waxay bixisaa adeegyo tigidhada tareenka dhowr ah oo loogu talagay miisaaniyada kasta iyo nooca safarka, inaad safar safar tahay iyo in kale, firaaqada, ama labadaba.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya fasalada tikidhada tareenka Trenitalia waa isku dheellitir la'aanta isbeddelka tikidhada, qiimaha, iyo adeegyada. Intaas waxaa sii dheer, tigidhka tareenka caadiga ee dhaqaalaha waa habka ugu raqiisan uguna jilicsan ee lagu safro Talyaaniga.
Tigidhada Dhaqaalaha ee Trenitalia Standard:
Trenitalia Tikidhada tareenka ee Heerka Dhaqaalaha ayaa ugu jaban dhammaan qiimaha guryaha Trenitalia. Waxaa ugufiican inaad jartaan tikidhka tareenka kahor sababtoo ah tikidhada aasaasiga ahi waa qiimo jaban – si dhakhso leh ayey u iibiyaan. Socotada heysata tigidhada tareenka caadiga waxay qaadan karaan shandado ku habboon booska boorsada, bilaash ah wayna joojin kartaa tigidhkooda tareenka inta aysan dhoofin ka hor waxayna heli karaan qayb ahaan lacag celin (lacagta jarista 20%).
Tigidhada Trenitalia ee Dhaqaalaha Bixiya:
Fasalka tikidhada tareenka wuxuu ka qaalisan yahay nooca Tikitka Trenitalia nooca, ah Tigidhada Tijaabada ah ee Dhaqaalaha Trenitalia waxay bixiyaan adeegyo dheeri ah. Tigidhada tareenka noocan ah waxaa laga heli karaa tareenada xawaaraha sare ee Trenitalia waxayna kuu ogolaaneysaa isbeddelada waqtiga iyo taariikhda hal mar kahor taariikhda bixitaanka..
Marka lagu daro faa'iidooyinka tigidhada tareenka caadiga ah, Tikidhada Trenitalia Economy Premium waxay bixiyaan kuraas qurxoon oo leh qol kabadan iyo kuraasida kuraasta safarada dhaadheer. Iskusoo wada duuboo, Waxaa jira saddex cunto xulo oo aad ka dooran karto iyo cunno fudud iyo cabitaanno ayaa loogu adeegi doonaa kursigaaga saaran tareenka Trenitalia.
Tigidhada Treintalia Ganacsiga:
The Trenitalia Tigidhada Ganacsiga iibsadayaashu waxay ku raaxeysan karaan dhammaan faa'iidooyinka aan kor ku soo qornay si kastaba ha ahaatee, Rakaabka Trenitalia Business Premier waxay ka faa'iideystaan ​​boorsooyin badan oo shandado ah, kuraasta maqaarka ee ergonomic raaxada leh, qolka dheer ee lugta, sedex cunto oo kala duwan oo laga xulan karo. Waxaa intaa dheer, waxaad leedahay darbiyo gaar ahaaneed iyo aag aamusnaan ah oo ku yaal meheradaha ganacsiga loogu talagalay ee tareennada Trenitalia.
Tigidhada Fulinta Treintalia:
The Trenitalia Tigidhada Fulinta iibsadayaashu way ku raaxeysan karaan dhammaan faa'iidooyinka aan kor ku soo sheegnay marka lagu daro kuraas ballaaran ergonomic oo ku fadhiisanaya kuraasta maqaarka si ay madaxooda u dhigaan oo ugu raaxaystaan ​​aragtida Talyaaniga.
Ma jiraa rukhsad Trenitalia ahta ah?
Waxaa jira Baasaboor loogu talagalay Talyaaniga, laakiin waxaa lagu talinayaa kaliya ikhtiyaar rakhiis ah haddii aad qorsheyneyso inaad tababarto safarka 14 maalmood, rukhsaddu waxay u oggolaaneysaa inay Talyaaniga ku baarto tareenno leh kaararka qaaska ah. Waxaa jira 3 heerarka gudbida ee la heli karo: Fudud, raaxada, iyo Fulinta oo waxaad dooran kartaa tirada safarooyinka u dhexeeya 3 si ay u 10 oo ka dooro nooca tareenka mid ka mid ah xawaaraha sare ee xawaaraha illaa inta udhaxeysa iyo EuroCity.
Kaarka waxaa lagu heli karaa qaab warqad waana in lagu dhaqaaqo gudahiisa 11 bilood laga bilaabo maalinta wax iibsiga.
Muddo intee le'eg ka hor bixitaanka Trenitalia inuu yimaado?
Si aad u hesho tababbarka Trenitalia oo aad wakhtigeeda ku habboon tahay, wadada tareenka waxay kugula talineysaa inaad ugu yaraan timaadid 30 Daqiiqado kahor intaan tareenkaagu dhoofin. Runtii waxaan nahay Badbaada A Tareenka, aamminsan tahay inay tahay waqtigii ku filan oo waliba waad ku raaxeysan kartaa dukaamada waxaadna heli kartaa waxyaabahaas aad ugu baahan tahay safarka tareenka inuu noqdo sidii ugu macquulsan oo macquul ah.
Waa maxay jadwalka tareenka Trenitalia?
Tani waa su'aal adag laakiin mid ka mid ah Save A tareenku uga jawaabi karo waqti buuxa iyo waqti-dhab ah. Si faahfaahsan u tag boggayaga hoyga, ku qor halka aad ka timid iyo meesha aad ku tageyso Talyaaniga, oo waxaad ka heli kartaa tan ugu saxsan Jadwalka tareenka Trenitalia waxaa jira. Tareennada Trenitalia waxay u socdaan sidii hore 6 ahay in 11 galabtii fiidkii min Milan ilaa Bologna, si loo cadeeyo tareenada badankood ee Trenitalia waxay socdaan ilaa fiidka dambe iyadoo tareenka baxaya nus saac kasta ama waxii la mid ah.
Saldhigyadee ayaa laga adeegsadaa Trenitalia?
Trenitalia waxay dabooshaa dhammaan Talyaaniga, si kastaba ha ahaatee, xarumaha waaweyn ee qaran waa Milan, Rome, Venice, Naples, Turin, Bologna, Geneva, Florence, iyo Verona. Waxaa jira 11 saldhigyada caalamiga ah: 5 Saldhigyada tareenka Trenitalia ee Switzerland iyo 6 saldhigyada Faransiiska iyo in yar oo ku yaal Austria iyo Jarmalka iyo Croatia. Markaa sida iska cad waxaad si raaxo leh oo dhaqso leh ugu dhex mari kartaa Yurubta quruxda badan isla markaana u bogi kartaa aragtida Talyaaniga adigoon waxba ka maqnayn!
Saldhigga dhexe ee tareenka ee ku yaal magaalada Milano wuxuu ku yaal ugu mashquulka badan Piazza Duca Ciyaayrahan. Saldhigga tareenka waa mid qaab ahaan qaab dhismeed ahaan fiican leh kuna hareeraysan dabaqyada dhismaha. Marka intaad sugeysid inaad gasho tareenka Trenitalia waad ku dhex socon kartaa oo aad u bogi kartaa farshaxannada yaabka leh.
Rome Termini waa mid ka mid saldhigyada tareenka ee ugu weyn Yurub. Waxay ku taalaa meel ka durugsan qubeyska Diocletian ee qadiimiga Rome. Iridda marinka ayaa ka socota Piazza dei Cinquecento. Waxaa jira 29 aagagga boosteejada garoonka iyo xafiiska tikidhada tareenka ee Trenitalia ayaa ku yaal meesha laga soo galo xarunta.
Xarunta tareenka ee Florence, Santa Maria Novella, waa socod gaaban oo ka fog Duomo iyo jiidashada ugu weyn magaalada hore ee Florence. Idaacadda waxaa loo magacaabay kaniisadda Santa Maria Novella oo ku taal irriddeeda. Sidaas, waxaad si fudud u xadin kartaa daqiiqado badan oo qurux badan magaalada qadiimiga ah, ka hor intaadan ku sii wadin isweydaarsiga xiga ee Talyaaniga.
Terminalka Naples waa bariga magaalada Old. Haddii aad qorsheyneyso inaad xoogaa sameyso safar-maalmeedka ka socda Naples ilaa Pompeii ama Sorrento, ka dib waad iska joogsan doontaa saldhigga tareenka Naples safarkaaga tareenka.
Haddii aadan hubin saldhigga tareenka ee laga dooran karo magaalada aad booqaneyso, waxaan ka samaynay degelkeena All Stations inta badan magaalooyinka waaweyn, sidaa darteed algorithmkeenu wuxuu kuu dooran doonaa saldhigga saxda ah ee ka tegista iyo tagitaanka.
Maxaan u soo qaadan karaa Trenitalia??
Sidoo kale muhiimad ayaa ah inaad naftaada u keento safarka Trenitalia waa muhiim. Dusheeda waxaad hubisaa inaad haysato dukumintigaaga safarka ee Trenitalia taleefankaaga ama daabacan iyo baasaboor shaqeynaya waa inuu lahaadaa had iyo jeer way wanaagsan tahay in la haysto caymiska safarka.
Shirkadda ay leedahay Trenitalia?
Trenitalia waxaa iskaleh dowlada talyaaniga waxayna kamid tahay FS Italiane Group.
Trenitalia Su'aalaha la isweydiiyo oo ku saabsan Xagee baan ula tegi karaa Trenitalia?
Gobol, tareennada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn iyo kuwa caalamiga ah, Tareennada Trenitalia waxay kuu qaadi karaan meel kasta oo ka mid ah Talyaaniga iyo waddamada xulay ee xadka la leh Talyaaniga. Tusaale ahaan, tareennada xawaaraha dheereeya ee Trenitalia waxaad u safri kartaa France iyo Switzerland.
Waa maxay nidaamka raacitaanka Trenitalia?
Dalbashada tikidhada tareenka iyo fuulitaanka Trenitalia waligeed ma sahlaneyn. Waxaad si sahlan ugu iibsan kartaa tikidka Trenitalia daqiiqada ugu dambeysa khadka tooska ah iyo ilaa 1 saac ka hor bixitaanka tareenka. Doonitaanka, waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa baasaboor iyo waliba inaad soo bandhigto nambarka PNR (6-lambar nambar). Si loo cadeeyo, lambarka PNR ayaa laguugu soo dirayaa emaylka xaqiijinta ballansashada ee leh tigidhka elektaroonigga ah. Uma baahnid inaad hore u sii daabacdo tigidhka tareenka maxaa yeelay waxaa laga heli karaa moobaylka oo ku lifaaqan emaylka xaqiijinta, iyo kontoroolka tareenka ayaa waliba xaqiijin kara tigidhadaaga magac ahaan xaaladaha ugu xun.
Waa maxay adeegyada Trenitalia?
Tareennada Trenitalia waxay leeyihiin qorshe loogu talo galay cabitaannada-kafateeriyada-kafeega oo loogu talagalay cabitaannada iyo cuntada fudud. Liistada waxaa ku jira ismaris, shukulaatada shukulaatada, cunto fudud, baararka shukulaatada, kafeega, shukulaato kulul, iyo shaah waxaadna markaas ku cuni kartaa oo ku cabbi kartaa gaariga makhaayadda ama waxaad ku gadan kartaa wixii aad ku soo celisay kursigaaga. Haddii aad safar ku gasho Meheradda, Premium, ama fasalka Koowaad waxaad ka dooran kartaa cabitaan soo dhaweyn oo bilaash ah ikhtiyaar ah 9 cabbitaannada la heli karo iyo macaan, macaan, ama cunto fudud oo aan lahayn gluten. Dhamaan tareenada Trenitalia, waxaa ku yaal boosas koronto oo ku xiga kursigaaga.
Su'aalaha Badanaa la Isweydiiyo Trenitalia FAQ – Miyay tahay inaan horay u sii qabsado kursi Trenitalia?
Markaad kaydiso trenitalia tigidhada, kursi si otomaatig ah ayaa laguu qoondeeyey oo boos celin gaar ah maari kartid marka aad sameyneyso boos celinta. Haddii ay jiraan kuraas bilaash ah markaad tareenka saaran tahay, Waxaa laguu oggol yahay inaad ku dhaqaaqdid, beddel kuraasta, oo ay leeyihiin meel ka duwan.
Ma ku jira khadka internetka ee Wi-Fi gudaha gudaha Trenitalia?
Markaad iibsato tikidhada Trenitalia kahor, waad ku raaxeysan kartaa Internetka oo bilaash ah dhammaan tareenada nooca Trenitalia frecciarossa iyo fasalada.
Gebogebadii, hadaad halkaan gaadhay, waad ogtahay waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid tareenka Trenitalia waxaadna diyaar u tahay inaad iibsato tigidhka tareenka Trenitalia SaveATrain.com.
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-trenitalia%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.